Arsenal Oo Ka Fiirsaneysa Inay La Soo Wareegto Ciyaaryahanka Inter Milan Christian Eriksen
HomeHoryaalka IngiriiskaArsenal oo ka fiirsaneysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka Inter Milan Christian Eriksen
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay qiimeneyso inay u dhaqaaqdo saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Inter Milan Christian Eriksen bisha Janaayo.
Hal-abuurnimo la’aanta Gunners ee khadka dhexe ayaa muujisay bilowgiisii ​​foosha xumaa ee xilli ciyaareedka, agaasimaha farsamada Edu ayaa dhawaan xaqiijiyay in kooxda ay raadineyso inay wax ka qabato arinta bisha soo socota.
Dominik Szoboszlai ayaa lala xiriirinayay inuu dhameystiri doono ku biirista Arsenal, laakiin xiddiga reer Hungary ayaa haatan ku biiray RB Leipzig, u dhaqaaqista kooxda Lyon ee Houssem Aouar ayaana u muuqata mid aan macquul aheyn.
Si kastaba ha noqotee, Gazzetta dello sport ayaa sheeganeysa in Mikel Arteta uu isku dayi karo inuu Eriksen dib ugu soo celiyo Waqooyiga London, iyadoo ciyaaryahankii hore ee Tottenham Hotspur uu ku dhibtoonayo inuu ku soo bilowdo tababare Antonio Conte .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Denmark ayaa horay loola xiriirinayay inuu u wareegayo garoonka Emirates taasoo u horseedi doonta Granit Xhaka inuu u dhaqaaqo dhanka kale, waxaana warbixinta lagu sheegay in Inter ay sidoo kale xiiseyneyso Dani Ceballos , laakiin taasi waxay la micno tahay in Real Madrid ay ka qeyb qaadaneyso wadahadalada lagu heli karo xidigan.